Photogimp dia mitondra ny interface Photoshop mankany GIMP tenany | Famoronana an-tserasera
Tsy majika izy io, saingy manana hery manova lehibe ity patch ity dia antsoina hoe PhotoGIMP ary izany dia hanome elatra GIMP hany ka saika mitovy amin'ny Photoshop ny traikefa.
NA fanontaniana interface foana ity karazana programa ity dia tena mitovy samy izy, raha zatra ny lalan-kely sy ny varavarankely misy azy ny olona, ​​manana an'io patch io eo am-pelatanantsika, na amin'ny Linux, PC ary MacOS, dia tokony hankafy azy io.
Eny, omaly fantatray ny fanitarana mamela anao hamafa vola miaraka amina kapoka iray amin'ny penina ao amin'ny Photoshop, anio dia hanome fihodinana ny GIMP isika dia toy ity programa Adobe ity ihany.
GIMP dia iray amin'ireo programa lehibe indrindra, amin'ny avy amin'ny fomba fijery afaka, noho izany dia manana mpanaraka an'arivony maro izy io. Satria izy dia programa tsy mitaky loharano be dia be avy amin'ny rafitra, noho izany ho an'ny PC efa antitra dia mihoatra noho ny atolotra azy.
Y es PhotoGIMP ilay manao majika. Misy ny toerana anaovany azy ao amin'ny GitHub, mazava tsara ao amin'ny kaonty Diolinux ary patch iray tena lehibe ho an'ireo izay mandeha ao amin'ny Photoshop ary maniry handeha haingana any amin'ny GIMP. Indrindra ny maka tahaka ny fihetsik'izy ireo.
avy amin'ny ity pejy ity nos ampianaro ny fomba fametrahana ireo rakitra ilaina amin'ny "patch" GIMP ary ovao izy. Anisan'ireo mampiavaka azy tsara indrindra ny endritsoratra, ny sivana Python, ary ny fahaizany tsara manararaotra ny varavarankely GIMP lehibe. Tolo-kevitra mahaliana ho an'ireo izay maniry programa tsy andoavam-bola izay tsy mandany loharano betsaka ary manana izany lafiny izany amin'ny interface ho an'ireo izay efa zatra ny programa Adobe.
Aza very maina ny fotoanao raha mampiasa GIMP ianao hifindra amin'ity patch ity izay manova azy saika mahagaga. Ataovy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Gimp » PhotoGIMP manova ny GIMP ho Photoshop saika mahagaga
Bob Ross: Ilay profesora mahatalanjona tokony ho fantatry ny mpizahatany solika rehetra